ဧရာညီနောင်: ပျက်နေတဲ့ Memory Stick ပြန်ကောင်းချင်ရင်
ပျက်နေတဲ့ Memory Stick ပြန်ကောင်းချင်ရင်
Memory Stick ကို Window XP မှာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်သွားရင်
ဥပမာ ။ ။ Memory Stick ရဲ. Size က0MB or0... ဖြစ်နေရင် ပြင်လို.ရအောင်ပါ...
ဒီနေရာလေးကနေ အဲဒီ Setup လေးကို Download လုပ်ပြီး မိမိစက်ထဲမှာ Install လုပ်ပါ။
ပြီးရင် အဲဒီ Software ကို run ပြီး ပျက်နေတဲ့ Memory Stick (Flash Drive)ကိုရွေးပေးပါ..
ပြီးရင် File System အမျိုးအစားကို ရွေးပေးပါ. (FAT32,NTFS)
Tick Quick Format ရွေးပါ..
Click Start ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ပါ..
သင့်ရဲ. ပျက်နေတဲ့ Stick လေးပြန်ကောင်းလာပါမယ်...
Posted by ဧရာညီနောင် at 10:38 AM